Wax badan haku bixin Naqshadeynta Shabakadaada | Martech Zone
Wax badan haku bixin Naqshadeynta Webkaaga
Sabtida, Juun 4, 2009 Khamiis, Juun 29, 2017 Douglas Karr
Qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda ayaa ah naqshadeeyayaasha shabakada - waxaana rajeynayaa inaysan ku xanaaqin qoraalkan. Marka hore, aan ku bilaabo inaan idhaahdo naqshadeynta websaydhka weyn waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa nooca macaamiisha aad soo jiidaneyso, heerarka jawaabaha ee rajooyinka gujinaya, iyo sidoo kale wadarta dakhliga shirkaddaada.
Haddii aad rumeysan tahay in badeecad weyn ama nuxur weyn ay ka guuleysan karto naqshadeynta liidata, waad qaldan tahay. The ku soo noqoshada maalgashiga naqshadaha waaweyn ayaa la caddeeyey in ka badan iyo in ka badan. Xaqiiqdii waa u qalantaa waqtiga iyo kharashka.
Taasi waxay tiri design naqshad weyn maahan inay kugu kacdo intaas inbadan, in kastoo. Nidaamyada casriga ah ee maareynta mareegaha sida WordPress, Drupal, Django, Joomla, Magento (ganacsiga), Mashiinka Muujinta, iwm dhamaantood waxay leeyihiin makiinado mowduuc leh. Waxa kale oo jira qaabab badan oo qaabaynta webka ah, sida YUI Grids CSS, loogu talagalay boggaga laga sameeyay xoq.
Faa'iidada isticmaalka nidaamyadan ayaa ah inaad awoodid wax badan badbaadi ee shabakadaada iyo waqtiga naqshadeeyaha garaafka. Naqshadeynta websaydhada xirfadeed waxay ku kici kartaa $ 2,500 ilaa $ 10,000 (ama in ka badan iyadoo kuxiran galka iyo tixraaca hay'adda). Waqti badan ayaa lagu qaadan karaa sameynta qaabka bogga iyo CSS.
Halkii aad ka bixin laheyd qaabeynta iyo CSS, maxaa u diiday inaad ka doorato kumanaan mowduuc oo horey loo dhisay oo aad si fudud ugu hesho farshaxankaaga garaafka ah naqshadeynta garaafka? Jebinta naqshad weyn oo lagu dhisay Photoshop ama Sawirqaade oo lagu dabaqo mowduuc jira waxay qaadataa qayb yar oo waqtiga ah marka loo eego naqshadeynta dhammaan xoqida.
Faa'iidada dheeraadka ah ee adeegsiga qaabkan ayaa ah in qaabeynta ay saameyn ku yeelan karto hagaajinta mashiinka raadinta iyo sidoo kale adeegsiga - wax ay horumariyayaashu sida caadiga ah ka taxaddaraan ka hor intaanay daabicin kuna iibin mawduucyada khadka tooska ah. Maaddaama in badan oo ka mid ah akhristayaasheydu yihiin isticmaaleyaasha WordPress, mid ka mid ah boggaga aan u jeclahay tan waa WooThemes. Wixii Joomla, ah Mawduucyada Rocket waxay leedahay xulasho fantastik ah.
Hal talo oo dheeri ah, markaad rukumo ama iibsato mawduucyadan - hubi inaad hesho liisanka soo-saaraha. Liisanka horumariyaha ee WooThemes wuxuu kudhowaad yahay laba jibaar qiimaha (wali wuxuu ka bilaabanayaa $ 150!). Tani waxay ku siineysaa feylasha dhabta ah ee Photoshop si aad u siiso farshaxankaaga garaafka ah ee aad ku qaabeyso!
Tags: DjangodrupalMashiinka MuujintaJoomlamagentogantaalloWordPressYahoo UIyui grid css
Ganacsigaaga iyo Suuqgeynta Wabiga ahaan
Jul 4, 2009 markay tahay 7:33 PM
Waxaan ka helaa tusaalooyinka CSS-ka http://www.webassist.com. Dhowr waa bilaash, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa kale oo badan oo lacag yar laga qaado.
Jul 7, 2009 markay ahayd 1:12 AM
Mararka qaar maamulayaasha degmadu kuma xisaabtamaan inta ay le'eg tahay waqtiga dib u habeynta shaagagga. Isticmaalidda sheybaarrada oo diyaar u ah inaad marto Mawduucyada ayaa ah fursad weyn oo mararka qaarkood BILAASH ah Kaliya isticmaal!
Boostada Weyn. Dib ayaan ugala socon doonaa wixii faahfaahin ah.
Jul 8, 2009 markay ahayd 12:47 AM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay tan. Shirkad ku saleysan nashqadeyn ahaan waxaan isku dayeynaa inaan adeegsanno mawduucyo iyo waliba koodh qaas ah si aan ugu qiimeyno naqshadeynta websaydhka sida ugu macquulsan.
Jul 10, 2009 markay ahayd 4:13 AM
Waxaan u maleynayaa inay kuxirantahay shirkada goobta loogu talagalay.
Waan ku raacsanahay inay jiraan arrimo badan oo waaweyn oo halkaas ka dhigi kara suurtogalnimada abuuritaanka degel qurxoon oo raqiis ah. Heck, boggeyga gaarka ah waa shey 100% ah waana jeclahay!
Si kastaba ha noqotee, qaab-dhismeedku had iyo jeer uma shaqeyn karo shirkad weyn, shirkad takhasus leh ama mid leh baahiyo gaar ah oo aaladda degelku aysan wax ka qaban karin.
Caadi ahaan, waan eexanahay tan iyo markii wakaaladaydu ay abuurto "qaali" degello loogu talagalay naqshadeynta websites
Si kastaba ha noqotee, waxaan horay isugu daynay inaan u adeegsanno sheybaaradeena macaamiisheena iyo waqtiga intiisa badan, waxay rabaan inay wax ka beddelaan, wax ka beddelaan, oo ay "ka dhigaan mid gaar ah" waxayna ku dambaynaysaa inay ahaato qaab caado u ah si kasta ha noqotee.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan si taxaddar leh u ilaalinnaa si loo hubiyo in sumcadda shirkaddu ay si sax ah uga muuqato naqshadeynta bogga. Tani si fudud looma fulin karo marka la isticmaalayo sheybaarada.
Ugu dambeyntiina, inta badan macaamiisheennu waxay adeegsanayaan barnaamijyo gaar ah oo websaydh ah degelkooda sida diiwaangelinta dhacdooyinka, buugaagta alaabada adag, iyo agabyada suuqgeynta si ay u maareeyaan ololeyaasha. Waaxaha suuqgeynta ee shirkadaha sidan oo kale ah waxay innaga ku tiirsan yihiin dejinta degel websaydh ah oo ballaadhin aan kala go ’lahayn ku leh astaanta shirkadda jirta. Goobaha sidan oo kale ah waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed iyo sifiican si loo hubiyo in qeybahan ay si habsami leh isugu dhafan yihiin mana dareemayo in shaabad ay ku qanci doonto kiisaskaas.
Ma tahay goob qaas ah oo "qaali ah" qof walba? Maya. Si kastaba ha noqotee, iska hubi inaad ogaato macmiilkaaga. Mararka qaar template waa fiicanyahay. Waqtiyada kale, way habboon tahay waqtiga dheeriga ah iyo maalgashiga in lagu farsameeyo goob u gaar ah oo si habboon uga tarjumeysa sumadda shirkadda.